आइतबार १०, असोज २०७८ १४:४२
एनसेल आजियाटा लिमिटेडले ०७८ सालको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) दिएका विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर ‘पहिलो सिम’ नामक योजना ल्याएको छ । कम्पनीले एसइईका विद्यार्थीलाई १ रुपैयाँमा प्रिपेड सिमका साथै रिचार्जमा बोनस ब्यालेन्स, निःशुल्क माइफाइभ सेवा र बोनस डेटालगायतका सुविधा दिने योजना ल्याएको हो ।
आईपीओमा १० प्रतिशत अपागंता भएकाहरुलाईसुनिश्चितता गर्न माग
रामेछापका आङ छोङ्बा शेर्पाले अपाङ्गता भएकाहरूलाई आईपीओमा १० प्रतिशत हिस्सा सुनिश्चितताको माग गरेका छन् । उनले आज रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा पत्रकार सम्मेलन गरेर अपाङ्गता व्यक्तिहरूलाई आईपीओमा १० प्रतिशत हिस्सा छुट्टाएर सुनिश्चितता गर्न माग गरेका हुन् ।
छानविन समितिले बुझायो प्रतिवेदन: तुइन घटना भारतीय सुरक्षाकर्मीको संलग्नता
तुइन तर्ने क्रममा दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका- २ का जयसिंह धामी बेपत्ता भएको घटनाको सम्बन्धमा छानविन गर्न गठित समितिले प्रतिवेदन बुझाएको छ ।
कोभिड खोप प्रमाणीकरण गर्नेको संख्या ६७ हजार पुग्यो
कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएकामध्ये हालसम्म ६७ हजार व्यक्तिले खोप प्रमाणीकरण गराएका छन्।
दार्चुला घटनामा भारतीय एसएसबीको संलग्नता रहेको छानबिन समितिको निष्कर्ष
दार्चुला घटनामा भारतीय सुरक्षा बल (एसएसबी) को संलग्नता रहेको ठहर भएको छ । गृह मन्त्रालयले जयसिंह धामी महाकालीको तुइनबाट खसेर भएको घटनाबारे छानबिन गर्न बनाएको समितिले भारतीय एसएसबीको घटनामा संलग्नता रहेको ठहर गरेको हो । समितिले आजै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।
बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री शाक्य अल्पमतमा, एमालेका १२ सांसद समाजवादी खुले
बागमती प्रदेशकी मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्य अल्पमतमा पर्नु भएको छ । नेकपा एमालेका १२ जना प्रदेश सभा सदस्य (सांसद)हरुले एमाले छाडेर नेकपा एकीकृत समाजवादी रोजेपछि शाक्य अल्मतमा पर्नुभएको हो ।
एमालेमा तरंग : सुदूरपश्चिम प्रदेशका १३ सांसदले छाड्दै
बागमती प्रदेशपछि सुदूपश्चिम प्रदेशका १३ सांसदले नेकपा एमाले छाडेर नेकपा (एकीकृत समाजवादी) मा जाने भएका छन् । माधवकुमार नेपालको नेतृत्मा गठित नेकपा (एस) मा जान उनीहरुले आज (मंगलबार) प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा सनाखतका लागि जान लागेको बताइएको छ ।
डा. केसीसँग सरकारले गरेको पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि समिति गठन
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको पाँच बुँदे सहमति कार्यान्वयनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयले समिति गठन गरेको छ।
१४औं महाधिवेशनमा महामन्त्रीको उम्मेदवारी दिने गगन थापाको घोषणा
नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले आसन्न १४औं महाधिवेशनमा महामन्त्री पदमा उम्मेदवारी दिने घोषणा गर्नु भएको छ ।
असायलाई सहयोग गर्दै धनगढीका युवा व्यवसायी मिलन कुंवरले मनाए जन्मदिन
धनगढीका युवा व्यवसायी मिलन कुंवरले असायलाई सहयोग गर्दै आफ्नो जन्मदिन मनाएका छन् । बाहिर अनावश्यक फर्जुल खर्च गर्नुभन्दा पनि असाय गरिब दुखीलाई सानो भएपनि सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने सोचले उनले कैलालीको बौनियामा रहेको साहारा घरका असायलाई खाद्यन्न वितरण गर्दै जन्मदिन मनाएको बताए ।
मञ्जुश्री फाइनान्सको ९ हजार बढि कित्ता सेयर बिक्रीमा आउदै, न्यूनतम मूल्य कति ?
मञ्जुश्री फाइनान्स कम्पनी लिमिटेडले भोलिदेखि संस्थापक समूहको सेयर लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्ने भएको छ । कम्पनीले संस्थापक समूहको ९ हजार एक सय ८७ कित्ता सेयर लिलाम बढाबढ गरी बिक्री गर्न लागेको हो ।
एमाले, काँग्रेस र माओवादी खारेज हुनसक्ने
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा गजबको घटनाहरुले निरन्तरता पाइरहेका छन् । यी रोचक घटनाहरुबीच अर्को रोचक घटना हुने संकेतहरु देखिएको छ । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरु नेपाली काँग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र तीनवटै दल खारेज हुनसक्ने देखिएको छ । उनीहरु संविधानसभामार्फत् आफैले जारी गरेको संविधान पालना नगर्दा खारेजीको अवस्थामा पुग्न लागेका हुन् ।
अछाममा मष्टामाण्डौ र बाल्लेमाण्डौको जात्रामा स्वास्थ्य सामाग्री वितरण गरिने
नेपाली कांग्रेस अछाम का सहसचिव एवं प्रवक्ता, पंचदेवल बिनायक नगर पालिकाका नगर सभा सदस्य वेदप्रकास तिमिल्सैनाकको सहयोगमा कोरोना नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सामाग्री वितरण गरिने भएको छ ।
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई एकपछि अर्को धक्का लागिरहेको छ । ओली नेतृत्वको सरकार नढल्दै गण्डकी प्रदेशमा उनका विश्वासपात्र पृथ्वी सुब्बा गुरुङ्ग नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो । गुरुङ्ग नेतृत्वको सरकार ढाल्न नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एमालेकै माधवकुमार नेपाल समूहबीच गठबन्धन बनेको थियो । स्वतन्त्र सांसद दिपक मनाङेले समेत गुरुङ्गको साथ छाडेका थिए ।
रेल्वे कम्पनीका महाप्रबन्धक गुरु भट्टराईले सरकारलाई स्पष्टिकरण नदिने भन्दै दिए राजीनामा
नेपाल रेल्वे कम्पनी लिमिटेडका महाप्रबन्धक गुरुप्रसाद भट्टराईले पदबाट राजीनामा दिएका छन् । भट्टराईले बुधबार पदबाट राजीनामा दिएका हुन् ।
नियुक्त भएपछी कुलमानले भने प्राधिकरणमा दोस्रो कार्यकाल मेरो जीवनको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो
नेपाल विद्युत प्राधिकारणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरणमा दोस्रो कार्यकाल आफ्नो जीवनकै सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको रुपमा लिएको बताएका छन्।
नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई आन्दोलन विरोधी र देशद्रोही भन्दै उनलाई कुनै ठाउँ नरहेको उद्घोष गरेका छन्।
अझै पाठ्यपुस्तक पुगेन हुम्लामा
दुर्गम हिमाली जिल्ला हुम्लामा अझै पाठ्यपुस्तक पुग्न सकेकाे छैन् ।
पाली सेयर बजार सूचकले नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ । आइतबार नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ५४.३१ अंकले बढेर ३०५८.६३ अंकमा बन्द भएको छ । यो हालसम्मकै उच्च अंक हो । यसअघि जेठ ३१ गते नेप्सेले ३०२५.८३ अंकको कीर्तिमान कायम गरेको थियो ।
‘गद्दार’लाई आदर, परिचालित बाँदर !
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलालको स्मृति दिवसका अवसरमा कन्टिर–बाबू पुष्पलालप्रति सादर नमन गर्छन् । देश र श्रमजीवी जनताको मुक्तिका खातिर राजनीतिका माध्यमबाट उनले पु¥याएको विशिष्ट योगदानको ससम्मान सम्झना गर्छन् । कन्टिर–बाबू आफू जुनसुकै सिद्धान्त र विचारबाट प्रेरित वा प्रभावित रहे पनि उनी यसै आधारमा कसैप्रति भेदभाव गर्ने पक्षमा छैनन् । विगतमा गरेनन् र भविष्यमा पनि गर्नेवाला छैनन् । कुनै पनि व्यक्तिको मूल्याङ्कन उसको व्यवहार, विचार र योगदानका आधारमा गरिनुपर्छ भन्ने कन्टिर–बाबूको स्पष्ट मत छ ।